Agromart | Agricultural Marketplace Nepal आलु खेती गर्ने तरिका – Agromart
आलु खेती गर्ने तरिका
Q 1. आलुमा लाग्ने खुम्रे कीराको क्षतिको प्रकार कस्तो हुन्छ र कस्तो माटो÷अवस्थामा वढी क्षति पुर्याउँछ ?
खुम्रेकीराको वयस्क र लार्भा दुवैले वालीलाई नोक्सान पुर्याथउँदछन् । वयस्कले मुना र कलीला पात खाएर र लार्भाले माटो भित्र वसेर आलुका दाना एवं जरा खाएर नोक्सान गर्दछन् । वयस्कले चिसो, ओसिलो तर पानी नजम्ने ठाउँ मन पराउँदछ।खुकुलो तथा दोमट वलौटे माटोमा यिनीहरु वढी सकृय रहन्छन्।
Q 2. आलुमा लाग्ने रातो कमिला नेपालको कुन क्षेत्रमा वढी व्यापक छ ? यसको कस्तो अवस्थामा वढी आक्रमण गर्दछ ?
Q 3. नेपालमा देखापरेका भाइरस रोगहरु कुनु–कुन हुन् ? यी रोगहरु लाग्नबाट वच्न के सावधानी अपनाउनु पर्दछ ?
Q 4. आलुको खैरो पिप चक्रे रोग फैलने श्रोत के के हुन् ? यो कस्तो अवस्थामा वढी फैलिएर जान्छ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
यो व्याक्टेरियाको कारणवाट उत्पन्न हुने रोग हो।यो फैलने मूख्य श्रोत भनेको रोगी आलुको संसर्ग यस परिवारका विरुवाका अवशेष तथा माटो नै हो।यो रोग लागेपछी डाठँहरु औइलाएर निष्कन्छ।यसको व्यवस्थापनको लागि यस परिवारहरुका धान, मकै, गँहु, जौ जस्ता वालीले वाली चक्र अपनाउने, निरोगी वीउ मात्र लगाउने, वीउ आलु नकाटी सँगै लगाउने गर्नु पर्दछ।
Q 5. आलु खेती गर्दा वाली चक्र अपनाउन किन जरुरी हुन्छ ? वाली चक्रमा कुन–कुन वाली लागउनु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 6. आलुका स्थानीय जातहरु ऐजरु तथा डढुवा रोग सहन गर्न नसकेता पनि कृषकहरुले रुचाई रहेका हुन्छन् यसको रहस्य के हो ?
Q 7. आलुको पुतलीले संचित आलुमा कसरी क्षति पुर्याऊछ?
Q 8. आलुको मूल वीउ भनेको के हो र यसको उत्पादन कसले गर्दछ ?
Q 9. प्रि-वेसिक वीउ आलु भनेको के हो र यो किन उत्पादन गरिन्छ ?
प्रि-वेसिक वीउ आलु भनेको प्रयोगशालामा भाइरस रोगमुक्त पारिएका आलुका वेर्नाहरु टेस्ट ट्युवमा तयार गरी वातावरण अनुकुलित ग्लास हाउस (सिसाको घर) भित्र रोपी स–साना आलु दान (मिनी ट्युवर) उत्पादन गरिन्छ जसलाई प्रि-वेसिक वीउ आलु भनिन्छ । यसको मूख्य उद्देश्य जातीय गुण कायम गरी उत्पादन क्षमता कायम गर्नु हो ।
Q 10. आलु कस्तो ठाउँमा भण्डारण गर्दा राम्रो हुन्छ ?
आलुलाई अँध्यारो तर स्वच्छ हावा संचार हुने कोठामा भण्डारण गर्नु पर्दछ । यो तरीका घरायसी हो तर व्यवसायिक हिसावले शक्ति भण्डारमा २–४ डि. से. तापक्रम तथा ८०–९० % सापेक्षित आर्दतामा भण्डारण गर्नु पर्दछ ।
Q 11. वोक्रा हरिया भएका आलु खाएमा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ किन ?
आलु भण्डारण गर्दा उज्यालो कोठामा भण्डारण गरियो भने वोक्राको रंग हरियो मा परिणत हुन्छ र त्यसका विभिन्न रासायनिक प्रकृयावाट भएको हुँदा मानिसको स्वास्थ्यको प्रतिकुल हुन्छ।
Q 12. राम्ररी व्यवस्थापन गरी खेती गरिएको प्रति रोपनी जमीनबाट कति सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ?
आलुको उत्पादन/उत्पादकत्व जमीनको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन तथा लगाईएको जातम फरक पर्दछ । औसतमा भन्नु पर्दा १५–४० मे.टन प्रति हेक्टर उत्पादन भएको पाइएको छ ।
Q 13. आलुको बीयाँ नेपालको कुन कुन स्थानमा उत्पादन गरिन्छ ? र यसको उत्पादन प्रविधि कस्तो छ ?
Q 14. आलु बीयाँबाट कुन कुन तरीका अपनाई आलु खेती गर्न सकिन्छ र नेपालमा कुन तरीका प्रचलित छ ?
Q 15. रष्टिक स्टोर भनेको के हो ? यसको प्रयोग कुन भौगोलिक क्षेत्रमा गरिन्छ ?
Q 16. वीउ आलु उत्पादन गर्दा रोप्ने वेलामा आलु काट्नु हुँदैन किन ?
Q 17. रातो कमिला व्यवस्थापनको उचित तरीका के होला ?
Q 18. आलुको फेद काट्ने कीराबाट वच्ने उपाय के छ ?
Q 19. आलुको पुतलीले कसरी नोक्सानी पुर्या।उँदछ ? यसको व्यवस्थापन विधि के के छन् ?
यस कीरालाई आलुका जोताहा पनि भनिन्छ । यसको शरीर कैलो तथा अघिल्ला पखेटाहरु काला तथा पहेँला दागहरु हुन्छन् । यसको व्यवस्थापनको लागि कीरा लागेका दागहरु खाल्डोमा गाडि दिने, आलुका भाले पुतलीलाई पी.टी.एम. प्यारा फेरोमोन यौन आकर्षण प्रयोग गर्ने, भण्डार गर्दा जमीनमा लसुन, प्याज, भटमास जस्ता वाली लगाएमा रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
Q 20. कालो खोप्टे रोगवाट वच्न कुन रसायनले वीउ उपचार गर्न वढी लाभदायक हुन्छ ?
यो ढुसीजन्य रोग हो । यस रोगले आलुको वोक्रामा साह्रा–साह्रा काला खोप्टाहरु देखिन्छन् र उम्रन लागेका मुनाहरु मर्दछन् । यसको व्यवस्थापनका लागि डोरालसील ५०% धुलो विषादी १–१.५ % ग्राम प्रति लिटर पानीमा वा ३ % वोरिक एसिडको घोलमा ५–१० मिनेट डुवाई फिजाएर रसाउन दिनु पर्दछ ।
Q 21. आलुको ऐँजेरु रोग कसरी फैलन्छ र यसबाट वच्न कुन–कुन विधि अवलम्वन गर्न सकिन्छ ?
Q 22. आलुको खैरो पिप चक्के रोग लागेको जमीनमा फेरी यो रोग नलागोस भन्नका लागि केहि उपाय छन् कि ?
यो रोग नलागोस भन्नका लागि लामो घुम्ती वाली चक्र पद्धति अपनाउन राम्रो हो तर दुषित माटोलाई उपचार गर्नको लागि १०% फर्मालिनको झोलले करीव १ फीट सम्म भिजाई प्लाष्टिकले हावा नपस्ने गरी १ हप्तासम्म छोपिदिँदा यसका जीवाणुहरु मर्दछन् र रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
Q 23. आलुको डढुवा रोग नेपालको कुन क्षेत्रमा वढी फैलन्छ ?
Q 24. आलुको डढुवा रोग भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 25. आलुको भण्डारण प्रविधि के के छन् ?
आलुको भण्डारण साधारणत तीन किसिमवाट गर्न सकिन्छ । छोटो अवधिको लागि अँध्यारो कोठामा तर हावा संचार हुने गरी, जिरो इनर्जिको रष्टिक स्टोरमा र शित भण्डारमा २–४ डि. से. तापक्रममा र ८५–९० % आर्दतामा ६–८ महिना भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
Q 26. आलु वालीको शत्रु ऐजेरु रोग नलाग्ने जातहरु कुन कुन हुन् ?
ऐजेरु रोग आलुको निकै खतरनाक रोग हो । हाल यस रोगको अवरोधक जातहरु विकसीत भएका छन् जो यस प्रकार छन्ः कुफ्रिज्योेति, खमल सेतो–१, जनकदेव, डेजिरे आदि ।
Q 27. भाइरस मुक्त वीउ आलु कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
धेरै वर्ष सम्म एउटै वीउ र नजीककै स्थानमा उत्पादन गर्दा भाईरस रोगको संक्रमण वढ्दै जान्छ । यसवाट वच्नको लागि अनुसन्धान केन्द्रहरुमा उत्पादीत टिस्यू कल्चर तथा आलुको वीयाँ (TPS) वाट उत्पदित वीउ/वेर्नावाट खेती भाइरसमुक्त वीउ आलु उत्पादन गर्न सकिन्छ।
Q 28. आलु खन्नु भन्दा पहिले गरिने हाम्पुलीङ्ग भनेको के हो र किन गरिन्छ ?
आलुमा हाम्पुलिङ्ग भन्नाले आलु खन्नु भन्दा १०–१५ दिन अगाडी वोटहरु उखेल्ने अथवा काट्ने गरिन्छ।यसरी खन्नु अगाडी गरिने विधिले वनस्पतिक वृद्धि रोकिन गई माटो भित्रका आलु/बोक्रा छिपिन्छन् र भण्डारण गर्दा लामो सम्म राख्न सकिन्छ जसले गर्दा यसलाई लेक (२००० मिटर माथि) उत्पादन गर्दा भाइरस रोगको संक्रमणवाट जोगाउन सकिन्छ । यसले विउवाट सर्ने रोगहरु नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ ।
Q 29. आलु वालीमा छापो/मल्चिङ्ग किन र कसरी गरिन्छ ?
Q 30. आलु वालीमा गोडमेलको साथै उप्केरा लगाउन किन जरुरी हुन्छ ?
Q 31. आलु खेती गर्दा सिचाईले कतिको महत्व राख्दछ र वाली अवधिमा कति पटक सम्म सिचाई गर्न जरुरी हुन्छ ?
Q 32. खायन आलु र वीउ आलु उत्पादन प्रविधिमा के फरक छ ?
Q 33. वीउ आलु कसरी उत्पादन गरिन्छ ?
आलु खेती वारे साधारण जानकारी भएका कृषकहरुलाई वीउ प्लट प्रविधि थाहा भएमा उनीहरुले आफ्नो लागि आफै वीउ उत्पादन गर्न सक्तछन्।वीउ प्ल्ट प्रविधि भन्नाले खाने आलु रोप्ने ठाउँ भन्दा छुट्टै र वीउवाट सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि सावधानी अपनाएर खेती गर्नु पर्दछ।
Q 34. नेपालमा स्थानीय रुपमा प्रसिद्धि पाएका जात तथा लगाईएका क्षेत्रहरु कुन कुन र कहाँ कहाँ छन् ?
Q 35. नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन दिन सक्ने जातहरु कुन–कुन हुन् ?
Q 36. नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा लगाउन सकिने जातहरु कुन–कुन हुन् ?
Q 37. नेपालको तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रलाई सिफारीस गरिएका जातहरु कुन–कुन हुन् ?
Q 38. आलु खेतीमा अन्य वालीभन्दा वढी मलखादको आवश्यकता पर्दछ किन ?
आलु खाद्य तत्व वढी शोषण गर्ने वालीमा पर्दछ।यसलाई अन्नवाली तथा कोसेवाली भन्दा वढीनै मलखादको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।राम्रो उत्पादन लिनको लागि १०००–१५०० के.जी. कम्पोष्ट, ११ के.जी. डी.ए.पी., ७ के.जी. यूरिया तथा ५ के.जी. म्यूरेट अफ पोटास को आवश्यकता हुन्छ।
Q 39. आलु लगाउनु/रोप्नु भन्दा पहिले जग्गाको तयारी कस्तो हुन जरुरी छ ?
Q 40. आलु रोप्नु भन्दा १५–२० दिन अगावै वीऊ आलुको व्यवस्था गरिसक्नु भनिन्छ किन ?
Q 41. आलुमा स्वस्थ श्रोत वीउ भन्नाले के वुझिन्छ ?
Q 42. वीउ आलु प्लट छनौट गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ ?
Q 43. यसलाई खाद्यान्नको रुपमा पनि लिइन्छ किन ?
प्रथमतः यसमा २०% भन्दा वढी कार्वोहाईड्रेड पाईन्छ र उच्च पहाड जहा अन्य खाद्यन्न वाली लगाउन सकिन्न वा राम्रो उत्पादन लिन सकिदैन त्यस्तो ठाउँमा पनि आलु खेति गरिन्छ र चामलको सट्टामा प्रयोग गरिन्छ ।
Q 44. यो कस्तो मौसम/हावापानीमा हुने वाली हो ?
यो चिसो मौसममा फष्टाउने वाली हो।यो चिस्यान मुक्त मलिलो माटोमा राम्रो हुन्छ। तापमानको हिसावले १५–२० डि.से. तापक्रम भएका स्थानमा आलु खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ ।
Q 45. आलुलाई कुन कुन रुपमा प्रयोग गरिन्छ ? यसमा मुख्यत कुन–कुन खाद्य तत्वहरु पाईन्छन ?
आलुलाई ताजा रुपमा तरकारी तथा खाद्यान्नको रुपमा प्रयोग गरिन्छ भने यसवाट प्रशस्त प्रशोधित परिकारहरु तयार गरिन्छ र लामो अवधि र टाढा–टाढा सम्म ढुवानी गरी लान सकिन्छ। यसमा २०.६ प्रतिशत कार्वोहाइड्रेट, २.१ प्रतिशत प्रोटिन, ०.३ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ, १.१% रेशा र ०.९% भष्म पाइन्छ । यसमा एमिनो अम्ल पनि प्रशस्तमात्रामा पाईन्छ ।
Q 46. आलुवालीको नेपालमा महत्व के रहेको छ ?